Dubai Gold Souk | Ahịa ọla edo ọdịnala kacha ochie & kacha amasị yana ebe ndị njem na-ewu ewu
Ihe niile na -enwu enwu bụ GOLD
Mgbe ị na-eche banyere Dubai ị na-eche maka Gold. Gold Souk bụ otu n'ime ahịa ọdịnala kacha ochie na nke na-adọrọ adọrọ na emirate. Gold Souk dị na Deira, nke dị nso na ọdụ ụgbọ oloko Al Ras bụ otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya na-ewu ewu nke emirate a. Ọ na-emeghe ụbọchị asaa n'izu, site na Satọde ruo Tọzdee.
Ọbụlagodi na ị chọghị ịzụta ọla edo ma ọ bụ enweghị mmasị ọ bụla, ọmarịcha na ihe na-egbuke egbuke nke ebe a kwesịrị ikiri. Souk pụtara ahịa ọdịnala; Gold Souk nwere ndị na-ere ahịa 300 na-enye nnukwu nhọrọ nke ihe ịchọ mma sitere na ọla edo, ọla ọcha, diamond, na ọla ndị dị oke ọnụ ahịa na nkume. Edepụtara ọnụ ahịa maka karat 24, karat 22, karat 21 na karat 18 na dirham kwa gram. Cheta ka karat dị elu, ka ọla edo dị ọcha. ọla edo karat 24 bụ pasentị dị ọcha. A na-ere ihe dị iche iche n'ịdị arọ dị ka ọnụ ahịa ụbọchị ahụ si dị yana ụgwọ mgbakwunye maka ọrụ.
Ihe ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-azụ ahịa na Gold Souk:
Ọnụ ego ọla edo na-agbanwe kwa ụbọchị, a na-adụ gị ọdụ ka ịme nyocha ma lelee ọnụahịa ahụ n'ịntanetị tupu ị kpebie ịzụta ọla edo. Mara ọnụ ahịa ahịa tupu ị malite ịzụrụ ihe.
Na-agbagharị mgbe niile, ịdị arọ nke ihe ịchọ mma bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha mana arụ ọrụ ahụ bụ nkwekọrịta. Ndị na-ere ere ga-ebu ụzọ tinye ọnụ ahịa dị elu; ị ga-erite uru ma ọ bụrụ na ị na-achọkarị ire ahịa.
Enwere ike ịhụ ihe ndị yiri ya na ụlọ ahịa dị iche iche, yabụ legharịa anya tupu ị kpebie itinye aka na ịzụrụ ihe.
Ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa na-anabata kaadị kredit mana ị nwere ike ị nweta ego kacha mma ma ọ bụrụ na ị kwụrụ na ego.
Ụlọ ahịa ndị dị na noks na akuku nwere ike ịnye gị ọnụ ahịa ka mma n'ihi okporo ụzọ ndị na-azụ ahịa dị ole na ole na-ekpuchi ebe ahụ. N'ihi ya, ụlọ ahịa ndị dị n'akụkụ warara nwere ike inye gị azụmahịa ka mma.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọla edo niile a na-ere na souk bụ ihe dị adị, ihe na-emetụtakarị ndị njem nlegharị anya. Gọọmenti na-ahụ na e mezuru ụkpụrụ na ụkpụrụ iji hụ na ọ bụ naanị ezi ọla edo ka a na-ere. Jide n'aka na ịzụrụ n'aka ndị ere ikike.
Dị ka atụmatụ si kwuo, ihe dị ka tọn 10 nke ọla edo dị n'oge ọ bụla na souk. Ị ga-agarịrị na souk wee nyochaa ọmarịcha ọmarịcha ọla edo gbasasịrị n'ụzọ niile. Ọla edo edobere site na wara wara wara wara warawara abụghị ihe ị ga-agba akaebe kwa ụbọchị. Njem na Dubai ezughị ezu na-enweghị njem na Gold Souk a ma ama.
By eze 21|2022-05-23T17:53:13+05:30February 28th, 2019|blog|Comments Off na Ihe niile na -enwu enwu bụ ọla edo